Galab ayey kala lumeen ayada iyo walaalkeed, kadibna iyadoo raadineysa ayey waraabe ka dul dhacday duur cidla. Waxay xusuusatay sheeko xariir ay Hooyadeed uga sheekeysay oo ahayd gabar hadda ka hor Libaax caawiyay kadib markay hees u qaaday iyadoo lunsan.
Xaawo waxay markiiba gabay u tirisay dhurwaagii. Ereyadan hoose ayaa ka mid ahaa maansadaas.
Waagaas sideed sano ayey jirtay, taasina waxay ahayd gabaygeedii ugu horeeyay.
Kadibn reerkooda waxay usoo guureen magaalada Hargeysa oo ay ku soo barbaartay waxna ku baratay.
Inkastoo ay Xawo aragga la’adahay hadana waxay si joogto ah u isticmaashaa baraha bulshada iyadoo adeegsaneysa Teknolajiyadda casriga oo wax lagu aqriyo. Hadda waxay ku nooshahay caasimadda Muqdisho waxayna gabyadeeda ugu ololeysaa dadka naafada ah.
Gabayada Abwaanka oo idil Hawa Jama Abdi
Hawa Jama Abdi war dheeri ah